→ Sintomy maimaimpoana ny WhatsApp ho an'ny iPhone, iPad, Mac na PC | Vaovao IPhone
Sintomy maimaimpoana ny WhatsApp Tena mora izany, satria amin'izao fotoana izao, maimaimpoana tanteraka ho an'ny sehatra rehetra ny fampiharana. Izany no antony lehibe mahatonga ny fahombiazany, ary koa ny fahafaha-misy amin'ny fitaovana an-jatony tapitrisa eran'izao tontolo izao. Noho izany, tianay ny hanome tanana anao hahafantatra ny fomba mametraka WhatsApp maimaim-poana amin'ny fomba tsotra indrindra, noho ireo fampianarana natolotray. Noho izany, araraoty ny menus sy ny fizarana samihafa hitadiavana ny tutorial ilainao, hanome anao ny fampahalalana rehetra ilainao ianao mba tsy hanadino dingana iray ianao mandritra ny fametrahana.
WhatsApp ho an'ny iPad
Whatsapp ho an'ny Mac
Whatsapp ho an'ny iPhone
Ho fanampin'izay, WhatsApp dia manana injeniera manan-danja ao ambadik'izany, saingy tsy amin'ny fomba ofisialy ihany, fa amin'ny fomba ofisialy koa, noho izany dia tsy tokony ho hita ireo kinova WhatsApp novaina, izay fantatra amin'ny anarana hoe malaza WhatsApp Plus, fampiharana WhatsApp izay ahafahantsika mahazo bebe kokoa amin'izany, satria misy asa mahafinaritra tsy ananan'ilay rindrambaiko voalohany, izany no antony hanampianay anao hisintona maimaimpoana ny WhatsApp Plus amin'ny fitaovanao, ny kinova farany ny fanovana malaza indrindra amin'ny mpanjifa fandefasan-kafatra malaza indrindra eo amin'ny tontolon'ny teknolojia.
1 Ankafizo WhatsApp amin'ny fitaovana rehetra
2 Mametraka WhatsApp amin'ny PC
3 Inona ny Whatsapp?
4 Afaka manavao ny WhatsApp foana ianao
5 Rafitra fanafenana WhatsApp
6 Nanova ny fiainantsika ny WhatsApp
6.1 Solon'ny WhatsApp
7 Fantaro ny WhatsApp Plus sy ny karazany
8 WhatsApp any amin'ny firenen-kafa
9 Ireo zavatra tsy fantatrao momba ny WhatsApp
Ankafizo WhatsApp amin'ny fitaovana rehetra
Ny raharaha WhatsApp ho an'ny iPhone mampiavaka azy io. Ny sehatra Apple no niteraka ny WhatsApp ho mpanjifa fandefasan-kafatra, tonga tamin'ny taona 2010 tao amin'ny iOS App Store tamin'ny vidiny € 0,99, ary nanome toky anao serivisy mandritra ny fiainana izany, izany hoe tsy mila manavao WhatsApp ianao maimaim-poana, saingy niasa foana ny WhatsApp taorian'ny fividianana voalohany. Taty aoriana dia lasa afaka i WhatsApp tamin'ny taona 2013, na izany aza, lasa serivisy famandrihana isan-taona izy io, mitentina 0,99 € mandritra ny herintaona. Nisy zavatra nesorina tanteraka taorian'ny nahazoana ny Facebook, azo atao tanteraka izao ary mandrakizay ny misintona WhatsApp maimaim-poana.
WhatsApp dia mazava ho azy fa natomboka tamin'ny Blackberry Ankoatr'izay, na eo aza ny zava-misy ankehitriny dia rafitra tsy misy intsony noho ny fanjavonan'ny orinasa, WhatsApp dia mitohy miasa tanteraka sy maimaim-poana amin'ity rafitra fiasa ity. Na dia nanana BBPin aza ho mpifaninana lehibe amin'ity tranga ity izy, WhatsApp dia nahavita nifehy ny rafitra araka izay itiavany azy, ary ny ankamaroan'ny mpampiasa dia nisafidy ny hisafidy ny mpanjifa fandefasan-kafatra malaza indrindra eo amin'ny tsena, tsy manome tsiny azy ireo izahay. BlackBerry dia natao ho azy manokana, ny kitendry ara-batana dia manome hafainganam-pandeha sy fanoratsoratra izay tsy tratry ny fitaovana hafa.
Tsy mety tsy hita koa io WhatsApp amin'ny Android, no rafitra miasa lehibe eny an-tsena, mifehy eo amin'ny 70% ny fitaovana finday erak'izao tontolo izao, noho izany WhatsApp matanjaka kokoa amin'ny Android noho ny amin'ny rafitra miasa rehetra. Ity sehatra ity no voalohany download maimaim-poana ny WhatsApp Azo natao ihany koa ny manavao ny famandrihana ny fampiharana tsy nanjary mankaleo amin'ny Android, satria rehefa nandeha ny andro dia navadika indray ny fidirana ary nisy fanavaozana nandritra ny herintaona nipoitra tampoka. Sintomy ny WhatsApp ho an'ny Android Mora toy ny mandeha any amin'ny Google Play Store sy mikaroka ao amin'ireo rindranasa alaina indrindra, dia foana izy io ary ho anisan'ireo voalohany.
Toy izany koa ny takelaka manan-tsaina, misintona WhatsApp ho an'ny takelaka Azo atao tanteraka izany, ary mahita safidy hafa isika, indrindra rehefa mihazakazaka ny rafitra fiasa Android ny fitaovana resahina. Azontsika atao ny mametraka azy amin'ny alàlan'ny karatra SIM ao amin'ny takelaka mihitsy, na manararaotra karatra SIM hafa amin'ny finday. Ho fanampin'izany, ny kinova WhatsApp Web dia azo ampiasaina amin'ny takelaka amin'ny alàlan'ny maody biraonao ao amin'ny tranokala tianao, ka hanana ny kinova WhatsApp amin'ny takelaka tsy misy ezaka be loatra.
Na izany aza, ny tena malaza amin'ny takelaka dia ny iPad indrindra. Raha izany dia, mametraha WhatsApp amin'ny maha-izy azy, izany hoe, amin'ny maha fampiharana azy dia sarotra be izany, ary amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana toa ny Jailbreak ihany no ahafahantsika manatanteraka ity hetsika ity, na izany aza, toy ny amin'ny takelaka Android, azo atao ny mampiasa serivisy tranokala WhatsApp mora foana sy azo idirana amin'ny rehetra fitetezana amin'ny iPad, hahafahanay mampiasa WhatsApp maimaim-poana amin'ny iPad Raha tsy misy fiezahana be loatra, tsy mila miditra amin'ny serivisy WhatsApp Web fotsiny isika avy amin'ny tranokala Safari ihany ary misafidy ny maodely kinova desktop.
Mametraka WhatsApp amin'ny PC
Tamin'ny Mey 2016, nanana ny vaovao izahay fa nanapa-kevitra ny handefa kinova i WhatsApp tamin'ny farany WhatsApp ho an'ny MacAzontsika atao ny misintona ny rindranasa WhatsApp mivantana amin'ny Mac misy antsika ary miresaka amin'ny mpifanerasera amintsika amin'ny alàlan'ny fampiononana ny fitendry sy ny efijery amin'ny solo-saintsika, na solosaina finday toa ny MacBook na birao toa ny iMac, ny zava-dehibe ny zavatra dia afaka mifandray amin'ny namantsika sy ny olon-tiantsika isika noho ny fampiharana ny WhatsApp ho an'ny Mac.
Saingy tsy ny zava-drehetra no mijanona eto, ary io no fampiharana ny Whatsapp ho an'ny PC tonga tamin'io fotoana io ihany. Izay solosaina izay manana rafitra miasa Windows 8, Windows 8.1 na Windows 10, dia afaka misintona WhatsApp ho an'ny PC ary mampandeha azy io ho toy ny rindrambaiko hafa. Ny hany teboka ratsy dia ny mpanjifa WhatsApp Web tsotra, fa tsy fampiharana misaraka. Na izany aza, tsy afaka mifampiresaka amin'ny fifandraisana rehetra fotsiny isika toa ny kinova WhatsApp ho an'ny iPhone sy WhatsApp ho an'ny Android, fa afaka mandefa antontan-taratasy amin'ireo mpifanerasera aminay koa izahay, mazava ho azy, mizara sary izay ananantsika amin'ny PC-nay.
Inona ny Whatsapp?
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza indrindra tato ho ato. Tsy ny fampiharana no ampiasaina be indrindra amin'ny ankamaroan'ny finday avo lenta eran'izao tontolo izao, fa izy io koa nanova ny fomba fifandraisantsika amin'ny rehetra izany, ity fampiharana ity dia nanatsotra faran'izay betsaka ny fahafahan'ny fandefasana hafatra amin'ireo mpifanerasera aminay. Raha ny tena izy dia azontsika atao aza ny mieritreritra fa ny fomba fifandraisantsika amin'ireo olon-tiantsika dia niova, nivoatra be dia be izy io rehefa nandeha ny fotoana, fa ny fotony kosa dia mijanona ho iray ihany, mandefasa hafatra haingana.
Heverina fa mitahiry vola be amin'ny volan'ny olona rehetra izy io, satria niaraka tamin'ny fivoaran'ny teknolojia 3G dia nanomboka niroborobo ny fampiharana maro, na izany aza, tsy nisy na dia iray aza nahabe zavatra., mora ampiasaina ary haingana toy ny WhatsApp. Izany no antony, nanamboatra loaka haingana izy ireo ary nanolo ny BlackBerry PIN. Mora ny mandefa hafatra tsy voafaritra sy tsy voafetra amin'ny fotoana tena izy, ankoatr'izay, fotoana fohy taorian'ny namelana azy ireo hamorona vondrona mpifandray amin'ny resaka mitovy, ary koa ny fomba fandefasana sary, hampiakarana ny WhatsApp ho ambony indrindra amin'ny vola miditra rehetra lisitra sy fahombiazana, na inona na inona sehatra.
Tamin'ny volana Janoary 2010 no tonga voalohany tao amin'ny iOS App Store ilay fampiharana, noho izany, enina taona mahery izao ny fampiharana. Saingy miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia nahazo ny mifanentana amin'ny Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian ary hatramin'ny S40 Series. Ny ankamaroan'ireo rafitra miasa ireo dia nanjavona raha mbola mitazona ny toerana avo kosa ny WhatsApp. Izany no antony tsy ahafahantsika misalasala ny amin'ny fahombiazany, WhatsApp dia nanova ny tontolon'ny fandefasan-kafatra araka ny ahalalantsika azy.
Ny anaran'ny fampiharana dia avy amin'ny fitenenana amin'ny teny anglisy "Inona ny malaza?", fiarahabana mafana amin'ny lamaody eo amin'ny tanora. Miaraka amin'ny zava-drehetra sy miaraka amin'izany, ny nijanona ho fahita hatrizay dia ny sary famantarana maitso, balaonina misy hafatra izay misy telefaona ao anatiny, tsotra nefa mivantana, sary ekena eran'izao tontolo izao, toy ny marika hafa rehetra, ary izany no WhatsApp. ampahany amin'ny fiainana isan'andro an-jatony tapitrisa olona manerana an'izao tontolo izao, toa anao, izay mamaky anay. Izany no antony nahatongavanao teto amin'ity pejy ity, satria te hampianatra anao ny zava-drehetra momba ity fampiharana mahafinaritra ity izahay, mba hahazoanao tombony betsaka indrindra sy hankafizanao ny firesahana aminao. Fantatrao ve fa efa misy ny olona mijaly Fiankinan-doha amin'ny WhatsApp?
Afaka manavao ny WhatsApp foana ianao
Tsotra ny fanavaozana ny WhatsApp, na inona na inona sehatra misy anao, mila mankany amin'ny iOS App Store fotsiny ianao ary mijery ireo fanavaozana hahafantarana raha tonga ny fotoana na tsia. hanavao WhatsApp. Iray amin'ireo fanavaozana tianao ho an'ny WhatsApp ho an'ny iOS ny antsoina hoe "bug fixes", izay matetika manatsara ny fahombiazan'ny fampiharana amin'ny ankapobeny, saingy manafina ny vaovao maro izay hiseho tsy ho ela. Etsy ankilany, raha ny Android dia mitovy ihany ny asa, tsy maintsy mankany amin'ny Google Play Store isika, ary raha vao miditra isika dia hampahafantatra antsika ireo rindranasa izay mila fanavaozana.
Rafitra fanafenana WhatsApp
Noho ny fitomboan'ny fitakiana fiarovana rehefa mandeha ny fotoana dia nanapa-kevitra ny WhatsApp tamin'ny fiandohan'ny taona 2016 mba hampiditra rafi-pandrefesana hafatra. Raha azo atao, ny antso sy ny hafatra alefa dia voaroaka farany, izay midika hoe WhatsApp sy ny antoko fahatelo dia tsy afaka mihaino na mamaky. Ny fampandrenesana fiarovana kely dia haseho isaky ny manomboka miresaka amin'ny mpampiasa vaovao izahay mba hampahafantatra anay izany ny serasera anay rehetra dia voaro sy voahidyWhatsApp dia niloka mafy tamin'ny fiarovana sy tsiambaratelo, ary tsy zavatra azontsika atao tsinontsinona izany, ankehitriny dia zava-dehibe tokoa ny mitazona ny angon-drakitra.
Nanova ny fiainantsika ny WhatsApp
Araka ny fanadihadiana farany, 53% amin'ireo Espaniola dia misy chat WhatsApp 5 ka hatramin'ny 50 isan'andro, ary tsy zavatra manaitra antsika izany, mihamaro hatrany ny mampiasa an'io rindranasa io ho toy ny fitaovam-pifandraisana lehibe indrindra, ireo mpampiasa marobe manerantany dia manome fahatokisana izany. Mandritra izany fotoana izany, mpampiasa 90% ny mpampiasa WhatsApp dia mpampiasa mavitrika, izany hoe, mampiasa ny serivisy mihoatra ny indray mandeha isan'andro izy ireo, ka mahatonga azy io ho fitaovana fifandraisana tena izy sy lehibe. Ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa indrindra miaraka amin'ny 98,1% an'ny mpampiasa rehetra, ambonin'ny fifaninanana toa ny Telegram, Skype na Facebook Messenger.
Tamin'ny Febroary 2016, WhatsApp dia nanapaka ny sakana ho an'ireo mpampiasa arivo tapitrisa, mihoatra ny 200 tapitrisa ny mpanjifa Facebook Messenger, ohatra, ny serivisy fandefasan-kafatra. Araka ny antontan'isa farany, ny mpizara WhatsApp dia mandray hafatra sahabo ho 42.000 tapitrisa ary horonan-tsary maherin'ny 250 tapitrisa isan'andro, enta-mavesatra somary manan-danja, izay manamarina ny lazan'ny mpanjifa fandefasan-kafatra sy ny fiovan'ny fomba. Izay ifampiresahantsika sy ifandraisantsika amin'ny namana. , olon-tiana sy ireo zavaboary manodidina antsika rehetra.
Na eo aza izany, na eo aza ny be mpampiasa indrindra eran-tany, misy ny tsena manohitra azy, toa an'i Chine, izay tian'izy ireo WeChat, Korea atsimo, izay anjaran'ny Kakao Talk, na Japon, aiza -dalana, manohy mitazona ny toerany manjaka izy io. Na izany aza, miaraka amin'ny zava-misy fa nanjary maimaimpoana ho an'ny fiainana ny fampiharana sy ny fanombohana ny WhatsApp Web, dia mihamaro ny manatevin-daharana.
Fantaro ny WhatsApp Plus sy ny karazany
Na dia tsy misy ho an'ny iOS aza izy ireo (raha tsy hoe manana jailbreak ianao), maro Fanovana WhatsApp Plus izay efa nataon'ny mpamorona isan-karazany. Ohatra, whatsapp plus holo, izay kinova WhatsApp Plus izay mamela ny fampiasana ny interface Holo ho an'ireo fitaovana Android mbola tsy nohavaozina. Ity kinova Holo ity dia natsahatra tamin'ny faran'ny taona lasa noho ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny fitaovana Android dia efa nanana ilay interface efa voalaza teo aloha. Na izany aza, nisy loharanom-baovao hafa nipoitra, toa ny WhatsApp Plus Jimmods, fanovana ny WhatsApp miorina amin'ny iray amin'ireo fanangonana farany nataony, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo kinova miorina tsara izay azontsika jerena amin'ny Internet.
Ao amin'ity toerana ity no ahitanao ny fampahalalana ilaina rehetra, ny fanovana WhatsApp rehetra, ny kinova voalohany, ary koa fampianarana tsotra sy mora azo hahafahanao manararaotra ny ankamaroan'ny Whatsapp maimaim-poana. Zava-dehibe ny fahafantarantsika lalina ny fampiharana iray izay be mpampiasa amin'ny maha-WhatsApp azy, ary ambonin'izay rehetra fantatsika ny fetrany, ny vidiny ary ny mety ho vokany. Ny fampiharana ireo toetra ireo dia mety ho tonga sabatra roa lela miankina amin'ny toe-javatra inona, noho izany dia hitandrina am-pitandremana sy matihanina be isika.
WhatsApp any amin'ny firenen-kafa
Ny fomba nanapahan'ny WhatsApp ny fetra ara-jeografika dia mendrika hotononina koa, mipetraka ny fanontaniana raha tsia Afaka mampiasa WhatsApp any ivelan'ny fireneko aho, ary eny ny valiny. WhatsApp dia hiasa maimaim-poana na aiza na aiza na fitaovana izay navadika teo aloha ary misy fifandraisana Internet, na 3G na WiFi. Ho fanampin'izay, tsy ho very ny mpampiasa anay raha tsy esorinay ny rindranasa, ka mora ampiasaina amin'ny firenena rehetra ny WhatsApp, afaka manohy mitazona ny fifandraisana amin'ireo olon-tiana izahay na aiza na aiza misy anay, mila fifandraisana Internet fotsiny izahay.
Ny mety ho an'ny WhatsApp hafa dia ny fahafahantsika manao ampiasao ny kaonty WhatsApp misy anay na inona na inona karatra izay natolotray. Izany hoe raha, ohatra, nampavitrika ny WhatsApp tamin'ny karatra nasionaly izahay, fa handeha hivezivezy any ivelany izahay ary aleonay mandoa ny tahan'ny angon-drakitra misy any amin'ny firenena itodiana, tsy maintsy apetrakay fotsiny ilay karatra ary hankafizantsika hatrany izy io, satria ny fifandraisantsika dia azon'izy ireo atao ny manohy miresaka aminay amin'ny alàlan'ny laharanay teo aloha izay mifandraika amin'ny WhatsApp, fomba tsara hanohizana miresaka amin'ireo namantsika rehefa mipetraka any ivelany izahay, na dia manana nomeraon-telefaona iray hafa any aza hanararaotana ny tahan'ny firenena.
Ireo zavatra tsy fantatrao momba ny WhatsApp
WhatsApp dia teraka tamin'ny taona 2009. Tamin'ny 2014, WhatsApp dia azon'ny Facebook ho takalon'ny vola 19.000 tapitrisa, izay angamba tsy fantatrao dia ny anaran'ireo mpamorona WhatsApp, Jan Koum sy Brian Acton, nandao an'i Yahoo tamin'ny taona 2009 ary nanolotra ny tolotr'izy ireo ho an'ny Facebook sy Twitter, nandà azy ireo ny orinasa roa tonta, ary tsy fantatr'izy ireo ny alahelon'izy ireo, ary izany dia ny Facebook afaka namonjy an'arivony tapitrisa dolara raha nanakarama izy ireo izy ireo. Ny tsy fanakaramana dia nanompo tamim-pahagagana ireo mpamorona, izay lasa miliardera amin'ny fomba maherifo indrindra.
Lafiny iray hafa izay mety tsy fantatrao dia izany Ny WhatsApp dia tsy nandany na iray ariary akory tamin'ny fanaovana dokaSatria tsy nametraka doka na aiza na aiza mihitsy ny orinasa hampiroborobo ny fampiharana azy, dia vava am-bava fotsiny ny fahombiazana. Ho fanampin'izany, mahatonga ny mpandraharaha hamoy vola be, voalohany amin'ny fanesorana ny SMS ary ankehitriny koa manampy ny mety hanaovana antso an-tariby VOIP amin'ny alàlan'ny WhatsApp. Na eo aza izany, eo an-dàlana any amin'ny WhatsApp ihany koa ny antso an-tsary, izay mety hidika fiovana mahaliana iray hafa amin'ny fomba fifandraisantsika, manova izay rehetra kasainy i WhatsApp, ary izany dia ireo mpanjiona an'arivony tapitrisa dolara ho an'ny mpampiasa hanaraka azy any amin'izay alehako rehetra.
Manantena izahay fa hahita zavatra tadiavinao ianao wasap Eto izahay dia manana izay rehetra mety ilainao mifandraika amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka tsara indrindra eny an-tsena. Raha tianao misintona whatsapp maimaim-poana, eto no hahitanao izay rehetra ilainao.